काउकुती लगाउछु भन्दै ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ६९ वर्षीय वृद्ध पक्राउ !
काउकुती लगाउछु भन्दै ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ६९ वर्षीय वृद्ध पक्राउ ! काठमान्डौ -प्रहरीले रामेछाप घर भएकी ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने एक वृद्वलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लुबु लामाटार घर भएका ६९ वर्षीय शिव प्रसाद घिमिरे रहेका छन् । घिमिरेले गत जेठ १५.....
दैलेखमा आफ्नै श्रीमती र छोरालाई बेच्ने पुरुषलाई ३८ वर्ष कैद सजाय ! दैलेख : आफ्नै श्रीमती र छोरालाई बेचेको आरोप लागेका भैरवी गाउँपालिका–४ भैरीका २१ वर्षीय टेकराज पुरीलाई जिल्ला अदालत दैलेखले सोमबार साढे ३८ वर्ष कैद सजाय र ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको.....
चिउरा अड्किएर बालकको ज्यान गयो, स्कुलले लापरबाही गरेको आरोप !
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–५ रमाइलो बजार नजिकै रहेको मकालु मोरङ इङलिस स्कुलमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीको स्वास नलीमा चिउरा अड्किएर मृत्यु भयो । तर बालकका आफन्तले भने समयमै अस्पताल नपुर्‍याउनु विद्यालयको लापरवाही मान्छन् । मकालु मोरङ स्कुलको कक्षा ३ मा अध्ययनरत ११ वर्षीय बालक आर्यन माझीको मृत्यु भएको.....
व्वाइफ्रेण्डलाई सुटकेसभित्र कोचेर जेलबाट भगाउने प्रेमिका पक्राउ ! एजेन्सी -आफ्नो व्वाइफ्रेण्डलाई सुटकेसभित्र कोचेर जेलबाट भगाउने एक युवतीको प्रयास असफल भएको छ । भेनेजुयलाको उत्तरपूर्वमा रहेको जोसे एन्टोनीयो एन्जोआटेन्गुइ जेलभित्र थुनिएका इब्राहिम जोसे भार्गस गार्सियालाई भगाउन उनकी २५ वषिर्या.....
नेपालबाट घुम्न गएकी श्रीमतीलाई भेट्न नपाउदै रेलले लिग्यो मोहनको ज्यान !
मुम्बई -भारतको मुम्बईमा रेलबाट खसेर अछामका १ जना युवाको ज्यान गएको छ । अछामको मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर ८ वलिगाउ निवासि ३० बर्षिय मोहन परियारको वापिबाट मुम्बई जाने क्रममा रेलको ढोकाबाट खसेर शनिबार बेलुकि घटनास्थलमै मुत्यु भएको उहाका आफन्तले बताएका छन । गुजरातको वापिमा काम गर्दै आएका मोहन आफ्नो श्रीमति.....
रोल्पामा शिक्षिकाको लाठीचार्ज, १४ विद्यार्थी घाईते, ५ को हात भाचियो !
रोल्पाको एक विद्यालयमा शिशिक्षाको कुटाइबाट चौध जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। दाङसँग जोडिएको रुन्टीगढी गाउँपालिका ८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनको कुटाइबाट चौध विद्यार्थी घाइते भएका हुन्। यो खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा दाङबाट नरेन्द्र केसीले लेखेका छन्। कक्षा १ देखि ८ सम्म.....
भारतमा रेलले किचेर एकै परिवारका २ नेपालीको मृत्यु !
झापाको काँकडभिटाका एउटै परिवारका दुई जनाको भारतमा रेलले किचेर मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान ११ बजे भारतको बाघपुल नजिक उनीहरुलाई रेलले किचेको हाे । आफन्त भेट्न टिष्टा पुगेका झापा मेचीनगर नगरपालिका ७ का ३३ वर्षीय इन्द्र श्रेष्ठ र उनका छोरा ११ वर्षीय रोहन श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। घटनामा इन्द्रकी श्रीमती.....
लुगा सुकाउन छतमा गएकी “अनिताको” लडेर मृत्यु !
लुगा सुकाउन छतमा गएकी "अनिताको" लडेर मृत्यु ! शनिवार घरको छतबाट लडेर १ जनाको मृत्यु भएको छ । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका-६ पुष्पलाल चोकमाबिहान सवा ८ बजे छतमा लुगा सुकाउने क्रममा ३ तले घरबाट लडेर बर्ष ३६ की अनिता भन्ने रेमनीदेवी साह घाइते भएकी थिईन । गम्भीर घाइते भएकी साहलाई उपचारको लागि स्थानीय.....
बिच सडकमा महिला कुट्ने चालक बिरुद्ध आज “मुद्दा दर्ता” !
बिच सडकमा महिला कुट्ने चालक बिरुद्ध आज "मुद्दा दर्ता" ! चर्को भाडा लिएको बिरोध गर्ने महिलालाई सडकमै कुटपिट र गाली बेइज्जती गर्ने चालक गोकुल बोहराविरुद्ध कञ्चनपुर प्रहरीले आज मुद्दा दर्ता गरेको हो ।से १ ज १०९४ नम्बर गाडी (किया गाडी)का चालक बोहराले धनगढीकी लक्ष्मी धनाडीलाई सडकमै लछार पछार र कुटपिट गरेका थिए.....
बस र जीप ठोक्किदा, ५ घाईते, ३ को अवस्था गम्भीर !
लमजुङ - जिल्लाको बेंसीसहर नगरपालिका-१ उदिपुरको दलाल स्थित देउराली नजिकै आइतबार अपरान्ह बस र जिप एक आपसमा ठोक्किँदा ५ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये ३ को अवस्था गम्भीर छ । ४ जनालाई उपचारको लागि चितवनस्थित नयाँ चितवन मेडिकल कलेज लगिएको प्रहरीले बताएको छ । बेंसीसहरबाट भोटेओडारतर्फ जाँदै गरेको ग १ ज ६५१९ नम्बरको.....
पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन? यस्तो भन्छ अध्ययन
सुत्ने कोठा कस्तो राख्ने, यी उपाय अपनाउनुहोस जसले गर्दा फाईदै फाईदा हुनेछ !
नेलालको यस्तो ठाउँ, जहाँ भकभकी उम्लिरहेको “दूध” जिउमा खन्याएर पुजा गरिन्छ !
मानसिक स्वस्थ सुधार्न के गर्ने ? यस्ता छन् ५ उपाय !
जिवनमा “सफलता” कसरी प्राप्त गर्ने ? यस्ता छन् कारणहरु !
यसकारण सबैले “योग” गर्नुपर्छ तर यस्ता ब्यक्तिले गर्नहुदैन !
हेलिकप्टरबाट गोली हानी ५ हजार उट मारियो !
भिडियोमा हेर्नुहोस यस्तो बन्दैछ रानिपोखरी । (भिडियो)
काठमाडौंबाट यस्तो देखियो सुर्यग्रहण !
कपाल किन झर्छ ?